MW CMC Iyo Waftigii Uu Hogaaminayay Oo Ceel-biyoodkii 7aad Xadhiga Ka Jaray - Cakaara News
MW CMC Iyo Waftigii Uu Hogaaminayay Oo Ceel-biyoodkii 7aad Xadhiga Ka Jaray
Dhagaxmadow(Cakaaranews) Sabti 8da April 2017. Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo waftigii balaadhnaa ee uu hogaaminayay oo sii wata socdaalkii dheeraa ee lagu darsayay xaaladaha abaarta mashaariico horumarineed oo badana lagu booqday islamarkaana xadhiga ka jaray mashaariico horumarineed oo dhinaca ceelasha biyaha ah ayaa saaka ka dib markii ay kulamo la yeesheen qaybaha kala duwan bulshada raashinka noocyadiisa kala duwana u qaybiyeen bulshada ku dhaqan magaalada garbo ee ay abaaruhu saameeyeen, Ayaa waxay waftigu u ambabexeen dhinaca degmada sagag ee gobolka Nogob.
Hadaba waftigan uu hogaaminyo madaxwaynaha DDSI ayaa intii ay ku jireen jidka u dhexeeya garbo iyo sagag waxay sii mareen tuulooyin badan oo ay qaybaha kala duwan ee bulshada iska xogwaraysanayeen xaaladaha abaarta lana gaadhsiinayay bulshada deeqo raashin iyo calafka xoolaha isugu jira. waxaana waftigan si balaadhan loogu soo dhaweeyay magaalada sagag halkaasi oo uu madaxwaynaha DDSI xadhiga kaga jaray ceel-biyood (riig ah ) oo la yidhaahdo biyo janaale oo ay xukuumada DDSI ka hirgalisay degmada sagag kaasi oo xiligan looga faa’iidaynayo bulshada abaaruhu saameeyeen. Intaasi ka dib waxay waftigan uu hogaaminayo madaxwaynaha DDSI mdune Cabdi Maxamuud Cumar kulan balaadhan la yeeshay qabaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada sagaga kulankaasi oo lagu gorfeeyay qorshayaasha horumarka iyo sidii looga gaashaaman lahaa xaaladaha abaarta.
Waftigan uu hogaaminayo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa galinkii danbe ee maanta u soo ambabaxay dhinaca degmada dhagaxmadaw ee gobolka jarar iyadoo si balaadhan loogu soo dhaweeyay magaalada dhagaxmadaw soo dhawayn ka dibna waxuu madaxwaynuhu xadhiga ka jaray ceel-biyood laga hirgaliyay degmada dhagaxmadaw oo ah ceelkii 7aad ee uu xadhiga ka jaro madaxwaynuhu inta lagu jiro socdaalkan.
Ugu danbayntii Waftigan uu hogaaminayo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo wali ku jira socdaalkii dheeraa lagu marayay qaarka mid ah gobolada iyo degmooyinka DDSI ayaa wakhti-xaadirkan ku sugan magaalada dhagaxmadaw ee gobolka jarar.